ကိုရိုနာကြောင့် တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အိန္ဒိယကို ရွှေ့ပြောင်းလာနိုင်သလား - ข่าวสด
ကိုရိုနာကြောင့် တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အိန္ဒိယကိ...
ကိုရိုနာကြောင့် တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အိန္ဒိယကို ရွှေ့ပြောင်းလာနိုင်သလား
23 พ.ค. 2563 - 17:59 น.
ကိုရိုနာကြောင့် တရုတ်အားပျော့လာချိန်ဟာ အိန္ဒိယအတွက် အခွင့်ကောင်းလို့ယူဆနေ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကိုဗစ် ၁၉ ကူးစက်ခံရတဲ့သူပေါင်း သန်းနဲ့ချီရှိလာချိန်မှာ တရုတ်အပေါ် ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်း များသထက်များလာပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှားက စက်ရုံတွေရဲ့ အဓိက စုဝေးရာ ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားဟာ ဆက်လက်တည်ငြိမ်နိုင်ပါ့မလား။
အိမ်နီးချင်းအိန္ဒိယ အတွက်အခွင့်အလမ်းသစ်ဖြစ်လာမလား။ အိန္ဒိယက တရုတ်နေရာကို သူတို့ အစားဝင်နိုင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါတယ်။
ကမ္ဘာမှာ တရုတ်အားပျော့လာတဲ့ အနေအထားဟာ အိန္ဒိယအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ရာ အခွင့်ကောင်းပါပဲလို့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး နီတင်ဂတ်ကာရီက ဆိုပါတယ်။
မြောက်ပိုင်း အူတရာပရာဒက်ရှ် ပြည်နယ်ရဲ့ လူဦးရေဟာ ဘရာဇီးနိုင်ငံ လူဦးရေလောက်ရှိပါတယ်။ အခုအူတရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်က တရုတ်ကို ကျောခိုင်းချင်တဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆွဲဆောင်ဖို့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီတောင် ဖွဲ့စည်းထားပြီးပါပြီ။
တရုတ်ကနေ ရွှေ့ပြောင်းလာချင်တဲ့ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေအတွက် အိန္ဒိယဟာ လူဇင်ဘတ်ရဲ့ နှစ်ဆကျယ်ဝန်းတဲ့ နေရာကို အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီး အမေရိကန် ကုမ္ပဏီကြီး ၁၀၀၀ ကျော်ကို ချဥ်းကပ်ဆက်သွယ်လာတယ်လို့ Bloomberg ကသတင်းထုတ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေးဌာန Invest India ရဲ့ အကြီးအကဲ ဒိပါဘာဂလာက အဲသလို ချဥ်းကပ်ဆက်သွယ်မှုဟာ စဥ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းစဥ်ပါလို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုဗစ်ဟာ အဲဒီလုပ်ငန်းစဥ်ကို အရှိန်မြှင့်ပေးလိုက်တာပါလို့ ဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယ၊ အမေရိကန် ကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးပွားလာရေး လော်ဘီလုပ်နေတဲ့ အမေရိကန် အိန္ဒိယ စီးပွားကောင်စီ (USIBC) က အိန္ဒိယဟာ သိသိသာသာ တိုးမြှင့် ဆွဲဆောင်မှုတွေလုပ်လာနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“အိန္ဒိယက ဆွဲဆောင်ရာမှာ ဗဟိုအဆင့်မှာရော ပြည်နယ်အဆင့်မှာပါ ကုမ္ပဏီတွေဆီ ပစ္စည်းသွင်းမယ့်အပိုင်းကို ဦးစားပေး ဆွဲဆောင်တာ တွေ့ရပါတယ်”လို့ (USIBC) ရဲ့ အကြီးအကဲ နီရှာဘီဆဝါက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတချို့ ရှိနှင့်ပြီးသား ကုမ္ပဏီတွေဟာ တရုတ်ကိုကျောခိုင်းပြီး အဦးဆုံးရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အိန္ဒိယမှာ ရွှေ့ပြောင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ဆွဲဆောင်
ဒါပေမဲ့ ဒီအဆင့်ဟာ အကဲဖြတ်သုံးသပ်ဆဲ အဆင့်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ အလျင်အမြန်ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့တော့ မထင်ရပါဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
တကမ္ဘာလုံးက ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ စာရင်းပိတ် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းက အရှူံးပြနေချိန်မှာ ပစ္စည်းတင်သွင်းမယ့် ဖောက်သည်အားလုံး အသစ်ပြောင်းလိုက်ဖို့ ဆိုတာ အပြောလွယ်ပေမယ့် အလုပ်ခက်လှပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတိုင်းလိုလိုဟာ ကပ်ဘေးကြောင့် ငွေသားရော၊ အရင်းပါ ကျပ်တည်းနေကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အပြောင်းအလဲတခုခုလုပ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်သတိကြီးကြီး ထားကြမှာပါလို့ စီးပွားရေးပညာရှင် ရုပဆပ်ဘရာမန်ညာကဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယက မြေအသင့်ပြင်ဆင်ထားတာဟာ မှန်ကန်တဲ့ ခြေလှမ်းတလှမ်းပါ။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ မြေစျေးတခုတည်းကိုကြည့်ပြီး ရွှေ့ ပြောင်းလာလိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်ကြောင်း တရုတ်အရေးစောင့်ကြည်သူ ရာဟူးဂျက်ကော့က ဆိုပါတယ်။
ထုတ်လုပ်မှုနဲ့သွင်းအားစုဆိုတာဟာ လူတချို့ထင်ထားတာထက် ခွဲရခက်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နေ့ချင်းညချင်း ခွဲထုတ်လို့ ရတဲ့ အရာမျိုး မဟုတ်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဆိပ်ကမ်းကောင်းတွေ၊ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတွေ၊ အရည်အသွေးမီတဲ့ အလုပ်သမားတွေ၊ တခြားလိုအပ်ချက်ပေါင်းစုံ ပေးထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအားလုံးဟာ အချိန်အတိအကျ လည်ပတ်ရတဲ့ နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းကြီးတွေ အတွက် သိပ်အရေးကြီးပါတယ်။
တရုတ်ကဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အိန္ဒိယကပေးနိုင်မလား
တကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံပေါင်းစုံ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေအတွက် အိန္ဒိယကို ရွေးဖို့ခက်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတကြောင်းရှိပါသေးတယ်။ အဲဒါကတော့ ကမ္ဘာ့အဓိက ပစ္စည်းသွင်း ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ကွန်ရက်နဲ့ အိန္ဒိယနဲ့ဟာ ကောင်းစွာချိတ်ဆက်မိထားတဲ့ အခြေအနေ မရှိပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က အိန္ဒိယဟာ အာရှနိုင်ငံပေါင်း ၁၂ နှစ်နိုင်ငံပါဝင် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူစာချုပ်တခုကနေ နုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) လို့ခေါ်တဲ့ အဲဒီကုန်သွယ် စာချုပ်ဟာ အာဆီယံနိုင်ငံတွေအပြင် တရုတ်၊ သြစတြေးလျ၊ဂျပန်၊ နယူးဇီလန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အိန္ဒိယ တို့ပါဝင်ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၇ နှစ်ကြာ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ပေမယ့် မပြေလည်ဘဲ နုတ်ထွက်သွားခဲ့တာပါ။
အဲသလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကြောင့် အဲဒီနိုင်ငံစျေးကွက်တွေဆီ ပစ္စည်းရောင်းချမယ့် ပို့ကုန်သမားတွေဟာ အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရဖို့ ခက်သွားပါတယ်။
အိန္ဒိယထဲ ရွှေ့ပြောင်းလာမယ့် စက်ရုံတွေဟာ အဲသလိုအချက်အလက်မျိုးကို စဥ်းစားကြပါလိမ့်မယ်။
“ကျွန်တော်ဟာ အိန္ဒိယမှာ ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ပြီး စင်္ကာပူကို ရောင်းချမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတော့ အိန္ဒိယနဲ့ စင်္ကာပူအကြား ကုန်သွယ်စာချုပ်ဘယ်လိုချုပ်ထားသလဲဆိုတာကို ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ စျေးပြိုင်ရောင်းချတဲ့အခါ အဲဒီအချက်ဟာ အရေးကြီးပါတယ်”လို့ အာရှဟာအနာဂတ်စာအုပ်ရေးသားသူ ပရတ်ဂ်ခန်နာက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
ဒေသတွင်းကုန်သွယ်ရေးက အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အချက်လို့ သူက ယုံကြည်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးဟာ အလိုလိုနောက်က လိုက်ပါလာလိမ့်မယ်လို့ သူကယူဆပါတယ်။
အိန္ဒိယဟာ နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်တွေကို သွေဖည်မှုရှိသလို ကမ္ဘာ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေအတွက် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်စေမယ့် မမျှတတဲ့ ဥပဒေတွေလည်း နိုင်ငံတွင်းမှာ ပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေရှိပါတယ်။
အွန်လိုင်းရောင်းချမယ့် ကုမ္ပဏီကြီးတွေအတွက် မရှိမဖြစ်ကုန်တွေကိုသာ ရောင်းချခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်မျိုး၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေဆီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ မစီးဝင်နိုင်အောင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေကို နည်းနည်းကစားထားတဲ့ အချက်မျိုးတွေဟာ အိန္ဒိယကို နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ မလာရဲအောင် နံရံဆီးကာထားတာနဲ့ တူနေပါတယ်။
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နရန်ဒရာမိုဒီရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့ အချက်ထဲမှာ ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကို ဦးစားပေးရေးဆိုတာ ပါပါတယ်။ ပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကို အိန္ဒိယကန်ထရိုက်တွေ အတွက် ဆွဲဆောင်နေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ အဲသလို မူဝါဒမျိုးကလည်း တခြားတဖက်မှာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယဟာ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းတွေကို ရှေ့နောက်ညီညွတ်တည်ငြိမ်အောင် လုပ်နိုင်မှ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အိန္ဒိယမှာ အခြေချအောင် ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာဘီဆဝါကဆိုပါတယ်။
အိန္ဒိယကလွဲပြီး တခြားရွေးချယ်စရာ ဘာတွေရှိသလဲ။
တရုတ်ကနေ ထွက်ခွာလာရင်တောင် လက်ရှိအခြေအနေမှာ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးတွေ အတွက် အကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးတိုင်းပြည်တွေဟာ ဗီယက်နမ်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်တို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ထိုင်ဝမ်တို့ကို နည်းပညာ အားသာချက်ကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ပါတယ်။ ဗီယက်နမ်နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကို လုပ်ခစျေးချိုတဲ့ နိုင်ငံတွေမို့ ကြိုက်နှစ်သက်နိုင်ပါတယ်လို့ မစ္စတာဂျက်ကော့က ဆိုပါတယ်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုး မပြန့်အောင် တရုတ်က လုံလောက်အောင် မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ထရမ့်က အပြစ်တင်
ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအခြေခံတဲ့ နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို တရုတ်ကနေ အဲဒီနိုင်ငံတွေဆီ ရွှေ့ပြောင်းနေတာ ဆယ်စုနှစ်ချီ ကြာနေပါပြီ။ အဓိက ရွှေ့ပြောင်းကြတဲ့ အချက်ကတော့ တရုတ်မှာ လုပ်အားခ စျေးတက်လာလို့ရယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အတွက် လိုက်နာကုန်ကျရတဲ့ စရိတ်စက ကြီးမြင့်လို့ရယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနှစ်ပိုင်းမှာ အမေရိကန်-တရုတ် ကုန်သွယ်စစ်ပွဲကြောင့် တဖြည်းဖြည်းချင်း ထွက်ခွာနေကြတာလည်း ရှိပါတယ်။ ကုန်သွယ်စစ်ပွဲ မစခင် တလအလိုဖြစ်တဲ့ ၂၀၁၈ ခု ဇွန်လမှာကတည်းက အမေရိကန်ဟာ ဗီယက်နမ်ကနေ သွင်းကုန်တွေ ၅၀ ရာနှုန်း ပိုမိုဝယ်ယူလာပါတယ်။ ထိုင်ဝမ်ကနေ ၃၀ ရာနှုန်းပိုမိုဝယ်ယူလာခဲ့တယ်လို့ South China Morning Post သတင်းစာရဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရ သိရှိရပါတယ်။
အိန္ဒိယကတော့ စျေးကွက်အပြင်ဘက် ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေ လိုချင်တဲ့ အချက်တချို့ အခြေအနေ တချို့ကို ဖန်တီးမပေးလို့ပါ။ နိုင်ငံတကာ ကုန်ထုန်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးတွေအနေနဲ့ ဒေသတွင်းစျေးကွက်ထက် ပိုမိုတဲ့ လိုလားချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံမှာ အခြေချကုန်ထုတ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာတလွှားကို တင်ပို့ရောင်းချနိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။
လောလောဆယ် သီတင်းပတ်တွေအတွင်း အိန္ဒိယပြည်နယ်တချို့ဟာ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီကြီးတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းပြီး အလုပ်သမားတွေကို အကာအကွယ်ပေးတဲ့ ဥပဒေတချို့ကို ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် အူတာပရာဒက်ရှ် ပြည်နယ်နဲ့ မက်ဒရာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တို့မှာ အလုပ်သမားတွေအတွက် အခြေခံအကျဆုံး လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး၊ လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်ရေး၊ အလင်းရောင် ကောင်းမွန်ရေး၊ သန့်ရှင်းတဲ့ အိမ်သာလိုအပ်ချက်လို အရာမျိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထားတာတွေကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီနည်းနဲ့ မက်လုံးပေး ဆွဲဆောင်တာဟာ ပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်စေတယ်လို့ မစ္စတာ ဂျက်ကော့က ထောက်ပြပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ကုမ္ပဏီကြီးအတွက် စားသုံးသူရဲ့ ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားစေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့မှာ မဖြစ်မနေလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့ အလုပ်သမားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီစည်းကမ်းတွေကို ချိုးဖောက်ပြီး အလုပ်သမားတွေကို ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီတဲ့ ခိုင်းစေမှုမျိုးတွေ လုပ်တယ်ဆိုရင် သူတို့ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်သမားတွေကို လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ်ပေးမှုတွေ ရှိဖို့လို
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ရာနာပလာဇာက အထည်ချုပ်စက်ရုံ မီးလောင်ပြိုကျခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အပြောင်းအလဲတခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအထည်ချုပ်စက်ရုံဟာ ဝေါလ်မတ်လို နိုင်ငံတကာ လက်လီစတိုးဆိုင်ကြီးကို ပစ္စည်းသွင်းနေတဲ့ စက်ရုံပါ။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်မရှိဘဲ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ အခြေအနေ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု မရှိတဲ့ အခြေအနေအတွက် တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဖို့ ဖိအားပေးခံခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ အိန္ဒိယဟာ ပိုကောင်းမွန်တဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေဖြစ်လာအောင် ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ အလုပ်သမားတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို လျှော့ချဖြတ်တောက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတာဟာ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေး လက်တွေ့နဲ့ ကင်းကွာပြီး ရှေးဆန်တဲ့ ဗျူရိုကရက်အတွေးအခေါ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အမေရိကန်ကတရုတ်ကို ဒဏ်ခတ်မယ့်အစီအစဥ်မှာ ဂျပန်ကပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ အနေနဲ့ သူတို့ကော်ပိုရေးရှင်းတွေ တရုတ်ကထွက်ခွာဖို့ဆောင်ရွက်တာရှိသလို ဗြိတိန်ကိုလည်း ဟွာဝေးရဲ့ 5G ကွန်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ဖိအားပေးခံရတာတွေရှိပါတယ်။
အိန္ဒိယအနေနဲ့ ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့၊ ကြီးမားတဲ့ ပထဝီနိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်ပေါ်စေဖို့ဆိုရင် အခြေခံကျကျပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီလို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုနေကြပါတယ်။
หนุ่มจีนหลงรัก สาวร้านนวดเท้า ยอมคุกเข่าขอแต่งงาน หลังรู้จักกันเพียง3วัน
แม่สิตางศุ์ อัพดั้งใหม่ หลังเพิ่งทุบหน้า เคสยากผ่า4ครั้ง สวยปังไม่ทิ้งสามี
เปิดใจ หนุ่ม กรรชัย ทำพิธีอะไร หลังนำพระ "หลวงปู่ศุข" วางบนสมุดข่อย
อัลบั้มภาพ ကိုရိုနာကြောင့် တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေ အိန္ဒိယကို ရွှေ့ပြောင်းလာနိုင်သလား